လစာ ၈-၈၀၀-၇၀၀-၀၆-၁၁ ရှိသော beeline အော်ပရေတာအားမည်သို့ခေါ်ဆိုရမည် - ဤဖုန်းနံပါတ်သည်နေ့ရောညပါအချိန်မရွေးလိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုလက်ခံရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ခေါ်ဆိုမှုသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ သင်လုပ်နိုင်သည် ...
ကာဇက်စတန်ရှိ Beeline အော်ပရေတာကိုဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲ။ အလိုအလျောက် ၀ န်ဆောင်မှု 0611 တွင်လိုအပ်သောပစ္စည်းမရှိပါ။ ညာဘက်ကို item ရှိပါတယ်။ အချက် ၂ - လူအုပ်စု။ ဆက်သွယ်ရေးယေဘုယျအားဖြင့်2ကိုခေါ်ဆိုသောအခါ - ပထမဆုံးခေါ်ဆိုရမည့်အရာ ...
ဘယ်လိုပိတ်ဆို့နေလျှင်, Beeline ၏နံပါတ် restore မှလပေါင်းများစွာပြီးနောက် SIM ကဒ်ကိုမသုံးခဲ့တာလဲ [အီးမေးလျ protected] အမှန်တကယ်ခိုးယူအရေအတွက်ကိုရပြန်လေ၏။ သူမ၏စာရေးကြိုးစားပါ။ အလက်ဇန်းဒါး, ကောင်းသောနံနက်! ရှည်လျားသောပြီးနောက်အခန်းကို Restore ...
သည်အခြားအော်ပရေတာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ဖုန်းကို "Beeline" A-100 သော့ဖွင့်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? လည်းသုညအဆက်အသွယ်သင်၏ဖုန်းထုတ်လုပ်သူရေးသားခဲ့သည်, သူတို့ကငါ့ကိုကုဒ်နှင့် chyudo စလှေတျတျောအလုပ်မလုပ်ခြင်းနှင့်ကြေညာချက်မကြိုးစားပါဘူး ...
FTTB ကြိုးမဲ့အင်တာနက်ဆိုတာဘာလဲ။ ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ မိတ်ဆွေများကဤအကြောင်းအရာကိုရေးသားကြသည်။ အောက်တိုဘာလ မှစတင်၍ ကျွန်ုပ်သည် Volga-Telecom ပံ့ပိုးပေးသည့် fiber-optic internet ကိုအသုံးပြုနေသည်။ Tariff“ More plus” ။ ၉၅၀ ရူဘယ်အတွက်
နံပါတ်တစ်ခုမှခေါ်ဆိုမှုများနှင့် SMS များအားလုံးအတွက်ပုံနှိပ်ထုတ်ယူနည်း။ အင်တာနက်မှတဆင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါသလား။ အသေးစိတ်မှာယူရန်လိုသည် ရုံးမှာ။ ၀ က်ဘ်ဆိုက် (www.beeline.ru) "ကျွန်ုပ်၏အကောင့်"၊ "ဘဏ္Informationာရေးသတင်းအချက်အလက်များ" အပိုင်းရှိ။ gt; I_) ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည် ...
အဘယ်သို့ငါအကောင့်ထဲမှာတည်သည်ငွေဘယ်လောက်တွေ့မြင်နိုင်သလဲ ကျွန်မအိမ်မှာအင်တာနက် beeline, က Natalia, ကောင်းသောနေ့လည်ခင်းရှိသည်! ချိန်ခွင်လျှာ Check, သင် Dashboard ကိုအတွက်လို့ရတယ်။ hi ငါမူလစာမျက်နှာ၏ချိန်ခွင်လျှာသိလားဘယ်လိုကြည့်ပါ ...
"Black List" အော်ပရေတာဝန်ဆောင်မှုကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲ။
"Black List" အော်ပရေတာဝန်ဆောင်မှုကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲ။ ဖော်ပြချက် - Black List ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုပါ။ သင်မလိုလားအပ်သောတွေ့ဆုံမေးမြန်းသူများကိုသူတို့၏ခေါ်ဆိုမှုများကိုပိတ်ပင်ခြင်းဖြင့်အလွယ်တကူကာကွယ်နိုင်သည်။ မင်းကိုခေါ်နေတယ် ...
သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုအိမ်မှာအင်တာနက်နှင့်အတူပေးဆောင်ဖို့ဘယ်လို? ခရက်ဒစ်ကဒ်အားဖြင့်ဖုန်းဖြင့် Turn! မိုဘိုင်းကတ်အားဖြင့်သင်တို့ကိုပင်လာသောအခါအဘယ်သူမျှမပိုက်ဆံအိတ်၏အပိုင်ထဲမှာဝယ်ယူမှုစတိုးဆိုင်များတွင်သို့မဟုတ်အွန်လိုင်းစေနိုင်သည် ...
အခြားဖုန်း Beeline Beeline အသံချဲ့စက်များ debility လွှဲပြောင်းထံမှငွေလွှဲဖို့ဘယ်လိုသင်ကမိုဘိုင်းအော်ပရေတာများ၏စာရင်းပေးသွင်းထားသူမှ၎င်း၏ Beeline မိုဘိုင်းဖုန်းအကောင့်အကောင့်ထဲကနေရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းနိုင် ...
beeline ရန်အော်ပရေတာကိုပဌနာကိုဘယ်လို? အဲဒါကိုဖယ်ရှားခံရဖို့မဖြစ်နိုင်ပေမယ့်သင့်ရဲ့တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ထည့်မှအင်တာနက်ပေါ်မှာထိုင်လျှင်, အရှင်သေချာအော်ပရေတာရဲ့အကူအညီကိုပေးဆောင် subscriptions ကိုအမိန့်ချမှတ်ရုံဒီတော့ ...
အဆိုပါ Beeline အပေါ်ကတိထားရာငွေပေးချေမှုယူနည်း။ ဒါရှည်လျား sms ကို IDT ဘို့သင်္ဘောသဖန်း ??? 10000 ရုံနေဆဲရိုက်အပေါင်းတို့နှင့် IDT .... Beeline .... ဒါဟာတစ်ခုခုဖြစ်ပါတယ် .... ဘယ်လိုပိုက်ဆံသာသိကြ ...
14 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,623 စက္ကန့်ကျော် Generate ။